အသက်အရွယ်ဆိုတာ ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုဆိုပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေကျ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပိုပြီး အိုမင်းလာတယ်လို့ ခံစားလာရတတ်တယ်မဟုတ်လား။ ကိုယ့်ရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံပေါ်မူတည်ပြီး ကြွက်သားတွေဟာ ကိုယ့်အသက်ထက်တောင်ပိုပြီး အိုမင်းရင့်လျော်နေနိုင်ပါတယ်။ နှလုံးခုန်တာကစပြီး၊ အစာခြေတာကနေ ထီးတစ်ချောင်းကို ဖွင့်လိုက်တာအထိ အရာအားလုံးဟာ ကြွက်သားတွေနဲ့ လုပ်ဆောင်ရတာဖြစ်တာကြောင့် မိမိကိုယ်ရှိ ကြွက်သားများကို အကောင်းဆုံး ထိန်းသိမ်းဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ ဘာကြောင့် ကြွက်သားတွေကို ထိန်းသိမ်းဖို့လိုအပ်လည်းဆိုတာကို အသေးစိတ် ထပ်မံကြည့်ရှုလိုက်ကြရအောင်။
ကြွက်သားတွေကို မဖြစ်မနေထိန်းသိမ်းသင့်တဲ့ အချက် (၈) ချက်
သဘာဝအရ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာတာနဲ့အတူ ဘဝတစ်လျှောက်မှာ သူငယ်ချင်းတွေ၊ ကလေးငယ်တွေ၊ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေအပြင် ကိုယ်လုပ်ကိုင်ကြိုးစားခဲ့သမျှရဲ့ ရလဒ်တွေကို တွေ့ကြုံခံစားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အသက်အရွယ်ကြီးရင်လာတာနဲ့အမျှ ကြွက်သားလျော့ရဲလာတာဟာ ပုံမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် “sarcopenia” လို့ခေါ်တဲ့ ကြွက်သားဆုံးရှုံးမှုပြဿနာတော့ မပါဝင်ပါဘူး။
လူတစ်ယောက်ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ ကြွက်သားလျော့ရဲလာစေမယ့် အကြောင်းအရာများကတော့
Potential Injuries (ဒဏ်ရာရနိုင်ခြေပိုများခြင်း)
အားနည်းတဲ့ကြွက်သားများဟာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစွန်အဖျားများကို ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းနည်းတာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ချိန်ခွင်လျှာညီမျှမှုအတွက် အားနည်းစေပါတယ်။ ကြွက်သားဆုံးရှုံးမှုနှင့်အတူအားနည်းသောဆဲလ်တုံ့ပြန်မှုများကြောင့် ပြုတ်ကျချော်လဲခြင်းမှရရှိတဲ့ဒဏ်ရာအနာတရများဟာ ပုံမှန်ထက်ရှည်ကြာလေ့ရှိပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်အစွန်အဖျားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှုအားနည်းခြင်းဟာ ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းတွေမှာ ထိခိုက်မှုဖြစ်စေပါတယ်။ ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်အလွယ်တကူလှုပ်ရှားနိုင်စွမ်းမရှိခြင်းဟာ အသက်အရွယ်ကြီးသူများအတွက် လွတ်လပ်စွာသွားလာလှုပ်ရှားခွင့်ပျောက်ဆုံးစေမယ့်အပြင် စိတ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပါထိခိုက်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်အလေးချိန်များလွန်းခြင်း – အဝလွန်တဲ့ လူကြီးတွေမှာ များသောအားဖြင့် ဗိုက်နားတစ်ဝိုက်မှာ အဆီပိုတွေ ရှိနေတတ်တာဟာ ပုံမှန်ကြွက်သားလှုပ်ရှားမှုကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်။ အဝလွန်ခြင်းနဲ့ အသက်အရွယ်အရ ကြွက်သားလျော့ရဲလာတာနဲ့ ပေါင်းသွားတဲ့အခါ ကျန်းမာရေးအတွက် စိုးရိမ်စရာတွေ ဖြစ်လာပါတော့တယ်။
ကိုယ်အလေးချိန်နည်းလွန်းခြင်း – အသက်အရွယ်အရ ကြွက်သားလျော့ရဲလာခြင်းဟာ ကိုယ်အလေးချိန်ကိုလည်း မမျှော်လင့်ဘဲ လျော့ကျစေပါတယ်။ ကြွက်သားသန်မာမှုဟာ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားနဲ့ တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်တာကြောင့် အသက်အရွယ်ရလာတာနဲ့ ဝိတ်ကျလာတဲ့သူတွေဟာ အစားအသောက်ပုံစံပြောင်းတာ သို့မဟုတ် လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်တာမျိုးလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
လူသားတွေရဲ့နှလုံးဟာ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာ အလုပ်အလုပ်ရဆုံး ကြွက်သားတစ်ခုပါပဲ။ ကြွက်သားလျော့ရဲလာတဲ့အခါမှာ နှလုံးရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေ၊ သွေးလည်ပတ်မှုတွေအပေါ် သက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်။
Insulin Resistance (အင်ဆူလင် ခံနိုင်ရည်ရှိမှု)
ကြွက်သားတွေဟာအလုပ်လုပ်ဖို့ သွေးတွင်းကသကြားဓာတ်ကို အသုံးပြုပါတယ်။ ကြွက်သားတွေ လျော့ရဲလာပြီး သွေးတွင်းသကြားဓာတ်အသုံးပြုမှုနည်းလာသည်နှင့်အမျှ စိတ်ဖိစီးမှုများလာခြင်းများဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့် ဆီးချိုကဲ့သို့ရောဂါများဖြစ်ပွားလာနိုင်ပြီး ကြွက်သားလျော့ရဲမှုကို ပိုဖြစ်စေပါတယ်။
Assisted Care Difficulties (ကြွက်သားများပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်စွမ်း)
အသက်အရွယ်ရလာသည်နှင့်အမျှ ကြွက်သားများ အားနည်းလာပြီး ထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပါက ပိုမိုနာကျင်စေနိုင်ပြီး ပျောက်ကင်းဖို့လည်း အချိန်ကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲဆိုရင် အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ ထိခိုက်မှုဖြစ်နိုင်ခြေ ပိုများသလို ကြွက်သားတွေ ပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးအောင် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ပိုမိုလိုအပ်လာတာကြောင့်ပါ။
အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ကြွက်သားတွေဟာလည်း အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ အားနည်းလာတတ်ပါတယ်။ သင် သို့မဟုတ် သင့်ထက်အသက်ကြီးသူတစ်ဦးဦးမှာ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုရာ ပြဿနာဖြစ်လာခဲ့ပါက ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနေနဲ့ ကြွက်သားလျော့ရဲလာတာကိုပါ ခံစားရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Quality of life (ဘဝနေထိုင်မှု)
လူငယ်လူရွယ်များတွင်တောင်မှ အဆီထက် ကြွက်သားပိုမိုသန်မာတောင့်တင်းသူများဟာ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံရှိတယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ကြွက်သားသန်မာမှုနဲ့ အဆီတို့ရဲ့ အချိုးကို ကျွမ်းကျင်သူများနဲ့ လေ့လာ ဆုံးဖြတ်ပြီး ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု ပိုမိုရရှိအောင်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ လှုပ်ရှားမှုနည်းသူတစ်ဦးဆိုပါက ကျန်းမာတဲ့စားသောက်ပုံစံနဲ့ အဆီလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ ကြွက်သားတွေကို ဂရုစိုက်ဖို့ အမြဲတမ်းစောလွန်းတယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ကြွက်သားတွေကို ဂရုစိုက်ဖို့အတွက် ကျန်းမာစွာစားသောက်နေထိုင်ခြင်း၊ နေ့စဉ်ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း စတာတွေနဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ အစားအသောက်အတွက် ပြင်ဆင်ဖို့အခက်အခဲရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ Ensure Gold ကဲ့သို့ အာဟာရဖြည့်စွက်စာရဲ့အကူအညီကို ရယူလိုက်ပါ။ အစားအစာများတွင်မဖြည့်ဆည်းနိုင်သော ဗီတာမင်နဲ့ သတ္တုဓာတ် ၂၈ မျိုး၊ HMB (မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အမိုင်နိုအက်စစ်တစ်မျိုး၊ ကြွက်သားကျန်းမာရေးအတွက် ပရိုတင်းဓါတ်တမျိုး)ဖြင့်ဖော်စပ်ထားပါသည်။
ကြွက်သားဆုံးရှုံးမှုသည် ကျွန်ုပ်တို့ အနားယူသည့်အရွယ်သို့ရောက်မှသာဖြစ်မည်ဟု မကြာခဏ ထင်တတ်ကြသည်။ အမှန်တကယ်တော့ သင့်အသက် (၃၀) နှောင်းပိုင်းတွင် စတင်ပြီး၊ ဆယ်စုနှစ် တစ်ခုစီတိုင်းတွင် ကြွက်သားထုထည် ၈%ခန့် ကို စတင်ဆုံးရှုံးပါသည်။ သင်၏တစ်သက်တာတွင် အစားအသောက်နှင့် လေ့ကျင့်ခန်းကို အကျိုးသက်ရောက်‌စေသည့် အခြားအလုပ်များကြောင့် သင်၏ကြွက်သားများသည် ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ အသက်အရွယ်ထက်ပင် ပိုမိုလျှင်မြန်စွာအိုမင်းလာနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို ‘ကြွက်သားအသက်’ ကိုမည်သို့ဆုံးဖြတ်ရမည်၊ မည်ကဲ့သို့အသက်အရွယ်အား မည်သို့သက်သေပြနိုင်မည်ကိုကျွန်ုပ်တို့စူးစမ်းလေ့လာကြရအောင်။
သင့်ကြွက်သားများ၏ သက်တမ်းသည် သင်၏ခွန်အားနှင့် ခြေလက်ကြွက်သားလှုပ်ရှားမှု များ၏စွမ်းဆောင်မှုတို့ကို သင်၏ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ သက်တမ်းနှင့် နှိုင်းယှဉ် တိုင်းတာခြင်း ဖြစ်သည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင် သင်အသက်ဘယ်လောက်ရှိကြောင်းသင့်ခံစားမှု ကို သင်၏ အသက်အမှန်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ခြင်းပုံစံမျိုးဖြစ်ပါသည်။ သင်၏ကြွက်သားသက်တမ်းအမှန်တကယ်ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် ရိုးရှင်းသောစမ်းသပ်မှုဖြစ်သည့် ထိုင်ထလေ့ကျင့်ခန်းကို ပြုလုပ်ပြီးဆုံးဖြတ်နိုင်ပါသည်။
၁။ သင်သည် ထိုင်ခုံတစ်လုံးကိုယူပြီးလျှင် သက်သောင့်သက်သာစွာထိုင်၍ ဒူးကို ၉၀ ဒီဂရီ ကွေးထားပြီး ခြေထောက်ကို မြေကြီးနှင့် ထိထားပါ။
၂။ Timer ကို အသုံပြု၍ လက်ပိုက်ထားပြီး ထိုင်ခုံပေါ်မှတတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန် ထိုင်ထ ၅ ခါပြုလုပ်ပြီး ကြာချိန်ကို မှတ်သားထားပါ။
၃။ သင်၏ကြာချိန်၊ အသက်၊ ကျား၊ မ ရွေးပြီးကြွက်သားအသက်တွက်စက်ထဲထည့်ကြည့်လျှင် သင်၏ကြွက်သားအသက်ကို ရရှိပါမည်။
၄။ ဒူးနာထားခြင်းနှင့် မကြားသေးမီက ခွဲစိတ်မှုများပြုလုပ်ထားလျှင် တစ်ယောက်ထဲမစစ်ဆေးပါနှင့်။ သင်၏မိသားစု (သို့မဟုတ်) သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ယောက်၏ အကူအညီဖြင့် သင်၏အချိန်နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို မှတ်သားခိုင်းထားပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ကြွက်သားစွမ်းအားသည် ကျန်းမားရေးတစ်ခုလုံးကို ညွှန်ပြသောကြောင့် အသက်ရွယ်ငယ်စဉ်ကပင် စောစီးစွာကြိုတင်ကာကွယ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
အာဟာရနှင့်အတူ – အစားအစာအမျိူးမျိုးတို့တွင် ပရိုတင်းကြွယ်ဝပြီး ဗီတာမင် ဒီကဲ့သို့ အဓိကအာဟာရများပါဝင်သော အစားအစာများသည် ကြွက်သားဆုံးရှုံးမှုကို နှေးစေပါသည်။ ၎င်းအစားအစာများသည် သင့်၏တည်ဆောက်ပုံကို ထောက်ပံ့ရန်အတွက် အရိုးသန်စွမ်းမှုကို တိုးတက်စေပါသည်။
လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်း – တစ်ပတ်လျှင် အနည်းဆုံး (၁၅၀) မိနစ်ခန့်၊ လူကြီးများသည် ကိုယ်ခံအားလေ့ကျင့်မှုကို ၁၀ မိနစ်မှ ၁၅ မိနစ်ခန့်၊ မြန်မြန်ဆန်ဆန် လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ထိုက်ချိပြုလုပ်ခြင်း၊ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး အကြောဆန့်ခြင်း နှင့် ယောဂလေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ခြင်းတို့ဖြင့် ကြွက်သားအားထိန်းသိမ်းရန် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
HMB ( hydroxymethylbutyrate) – ဇီဝဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သော အမိုင်နိုအက်စစ် Leucine သည် သင်၏ကြွက်သားများကို စောင့်ရှောက်ပေးရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ HMB ကို သဘာဝအစားအစာများတွင် အနည်းငယ်သာတွေ့ရသောကြောင့် အသက်ကြီးရွယ်အိုများတွင် လုံလောက်စွာရရှိရန်အတွက် ဖြည့်စွက်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ ပန်းဂေါ်ဖီ ၆၅၀၀ စားသုံးမှုနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက Ensure Gold ၂ ဇွန်းတွင် HMB ၁.၅ ဂရမ်ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် ဗီတာမင် ၂၈ မျိုးနှင့် သတ္တုဓာတ်များ ပါဝင်ပြီးအပြင် သင်သည် အစားအစာနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းများကို အတူတွဲလုပ်၍စားသောက်သည့်အခါ သင့်ကြွက်သားအသက်ကြီးခြင်းကို လျော့ချနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကြွက်သားများအား တစ်ခါတစ်ရံ ဘာသိဘာသာ ထားတတ်ပြီး ၎င်းတို့ဆုံးရှုံးမှုကို အိုမင်းမှု၏ ကဏ္ဍတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ကြသည်။ ပုံမှန်ဆေးစစ်ဆေးချိန်၌ သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းခြင်း၊‌ သွေးခုန်နှုန်းနှင့် ကိုယ်အလေးချိန်တို့ကို စစ်ဆေးတတ်ကြသော်လည်း ကြွက်သားကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုကို အမြဲအလိုလို ကျော်သွားတတ်ကြပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့က ကိုယ်ခံအားစနစ်သည် ၎င်းအပေါ်တွင်မူတည်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကြွက်သားများကို အမှန်တကယ်ကာကွယ်သင့်ပါသည်။
အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ ခိုင်မာသည့် ကိုယ်ခံအားစနစ်အတွက် ကြံ့ခိုင်သောကြွက်သားရှိခြင်းသည် အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးကြောင်းကို ပြသထားပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ကြွက်သားများသည် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်အလေးချိန်၏ ၆၀% ရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ ရွှေ့လျားမှု၊ ဟန်ချက်နှင့် ဇီဝဖြစ်ပျက်မှုတို့သည် ၎င်းတို့အပေါ်တွင် မူတည်သည်။ ကျစ်လျစ်သောကြွက်သားများလေလေ ဇီဝဖြစ်ပျက်မှုနှုန်းမှာ ပိုမိုမြင့်မားလေလေဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျစ်လျစ်သောကြွက်သားများသည် မကျန်းမာသော ကြွက်သားများထက် စွမ်းအင်များကို ပိုမိုလောင်ကျွမ်းစေပါသည်။ အားနည်းသော ကြွက်သားများသည် နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုများ၊ အသက်ရှုမှုပြဿနာများ၊ အရိုးအားနည်းခြင်း၊ ကိုယ်အင်္ဂါလုပ်ဆောင်မှုအားနည်းခြင်းနှင့် လွတ်လပ်မှုဆုံးရှုံးခြင်းကြောင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုများ ဖြစ်စေပါသည်။
ကြွက်သားကျန်းမာရေးသည် ကိုယ်ခံစွမ်းအားကို ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်စေသလဲ။
၁၀ % မျှသောကြွက်သားထုထည်ဆုံးရှုံးခြင်းကြောင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများကိုယ်ခံအားစနစ်ကို များစွာချို့ယွင်းနိုင်ပါသည်။ အကြောင်းအရင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ကြွက်သားများသည် အချို့သောဒြပ်ပေါင်းများနှင့် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ခံအားဆဲလ်များအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသော လှုပ်ရှားမှုများကို ထုတ်လုပ်ရန်တာဝန်ရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ကျန်းမာသန်စွမ်းသော ကြွက်သားများသည် အမိုင်နိုအက်စစ်ကို များစွာသိုလှောင်ထားပါသည်။ ၎င်းအချက်ကြောင့် သင့်ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို ရောဂါကူးစက်မှုမှ မြန်မြန်ဆန်ဆန်တုံ့ပြန်နိုင်အောင် ကူညီပေးပါသည်။
အနည်းဆုံးကြွက်သားဆုံးရှုံးမှု အတွက် သိကောင်းစရာများ။
အရွယ်မတိုင်ခင်ကြွက်သားဆုံးရှုံးခြင်း နှင့် ကိုယ်ခံအားစနစ်ထိခိုက်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်အတွက် ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် အာဟာရပြည့်ဝစေရန်အတွက် ဘက်ပေါင်းစုံမှချဉ်းကပ်မှု လိုအပ်ပါသည်။
လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်း – လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်းသည် တက်ကြွစွာနေထိုင်ရန်နှင့် ကြွက်သားကျန်းမာရေးကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် အကျိုးရှိသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍သင်သည် အချိန်ကြာမြင့်စွာ ထိုင်၍အလုပ်လုပ်ရပါက ကြွက်သားများလှုပ်ရှားမှု ရှိစေရန်အတွက် ရိုးရှင်းသောလေ့ကျင့်ခန်းများကို ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။ နံရံအသုံးပြု၍ ဒိုက်ထိုးခြင်း၊ တည်ငြိမ်မှုရှိစေရန် စားပွဲကိုကိုင်၍ ထိုင်ထလေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်း၊ ဘေးတိုက် Planksလေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်သင့်ပါသည်။ ၎င်းလေ့ကျင့်ခန်းများသည် သင်၏အိမ်တွင် သက်သောင့်သက်သာဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
အာဟာရဓာတ်များ ရယူခြင်း – ကြွက်သားသန်စွမ်းမှုကို ထိန်းသိမ်းရာတွင်အာဟာရဖြည့်စွက်ခြင်းသည် အဓိကကျသည်။ ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို ထောက်ပံ့ရန်အတွက် သက်ကြီးရွယ်အိုများသည် ကိုယ်အလေးချိန် ၁ ကီလိုလျှင် ပရိုတင် ၁.၂ ဂရမ်လိုအပ်ပြီး လူငယ်များသည် ၀.၈ဂရမ်လိုအပ်ပါသည်။ အဓိကအစားအစာ တစ်ခုစီတွင် အရည်အသွေးပြည့်ဝသော အသားများ၊ ဥအမျိုးမျိုး၊ ဒိန်ချဉ်၊ အခွံ့မာသီးများနှင့် ပဲများ စသည့်တိုကို မျှတစွာ စားသုံးသင့်ပါသည်။
ဖြည့်စွက်အာဟာရများ စားသုံးခြင်း – ပုံမှန် အစားအစာများကို စားသုံရန်ခက်ခဲသူများအတွက် ဖြည့်စွက်အာဟာရကို အစားသောက်အဖြစ်အစားထိုးနိုင်သည်။ ဖြည့်စွက်အာဟာရတစ်ခုဖြစ်သော Ensure Gold တွင် ဗီတာမင် ၂၈မျိုး၊ သတ္တုဓာတ်များနှင့် HMB ( Leucine ပြိုကွဲရာမှ ထွက်ပေါ်လာသော Hydroxymethylbutyrate ) တို့ပါဝင်သောကြောင့် ကြွက်သားကျန်းမာရေးကို ထောက်ပံ့ပေးပြီး ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို တိုးတတ်စေပါသည်။
အသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကြွက်သားအချို့ကို ဆုံးရှုံးရသော်လည်း သတင်းကောင်းမှာ ၎င်းဖြစ်ပွားနှုန်းကို မိမိတို့အနေနှင့် ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ပြည့်စုံမျှတသော အာဟာရဓာတ်ကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ခန္ဓာကိုယ်အား ထိန်းသိမ်းနိုင်ပြီး ကြွက်သားပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ရာ ကူညီပေးနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ သက်ကြီးပိုင်းခန္ဓာကိုယ်သည် ငယ်ရွယ်စဉ်ကဲ့သို့ အာဟာရဓာတ်များအား ကောင်းမွန်စွာ စီမံလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ပါ။ ထို့ကြောင့် ကြွက်သားဆုံးရှုံးမှုကို ထိန်းသိမ်းရန် ကောင်းမွန်စွာစားသုံးဖို့ လိုအပ်သည်။
အာဟာရဓာတ်နည်းပါးခြင်းနှင့် ကြွက်သားဆုံးရှုံးမှု သက်ရောက်ပုံ
သက်ကြီးပိုင်းများ အာဟာရချို့တဲ့ရသည့် အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာ ဇရာကြောင့် အနံ့အရသာပြောင်းခြင်းလောက်နှင့်ပင် ဖြစ်နိုင်သည်။ အာဟာရချို့တဲ့ခြင်းက တိုက်ရိုက်မဟုတ်သော်လည်း ဘဝအရည်အသွေး နိမ့်ကျခြင်းသို့ ဦးတည်စေသည်။ သက်ကြီးရွယ်အိုတစ်ဦးက ရောဂါဖြစ်လွယ်လျှင်၊ အနာကျက်ကြာလျှင်၊ နာတာရှည် ကြွက်သားအားနည်းလျှင်၊ ဆေးရုံတက်ရလောက်သော အသေးစားဒဏ်များဖြစ်လျှင် ၎င်း၏ အာဟာရစားသုံးနှုန်းကို ပြန်လည်တွက်ချက်ရန် လိုအပ်သည်။
ကြွက်သားဆုံးရှုံးမှုကို ဖြေရှင်းပြီး ကောင်းမွန်စွာ ကြီးရင့်စေမည့် အရေးကြီး အာဟာရဓာတ်များ
သက်ကြီးပိုင်းများ၏ ကနဦးကြွက်သားဆုံးရှုံးခြင်းကို ခုခံမည်ဆိုရာဝယ် ကောင်းမွန်သော အာဟာရနှင့် အလေ့အကျင့်တို့ နှစ်ခုမျှတဖို့ လိုအပ်သည်။ ကောင်းမွန်သော အလေ့အကျင့်တို့သည် သက်ကြီးပိုင်း၏ ကိုယ်ခံအားနှင့် လွတ်လပ်မှုကို တိုးတက်စေလိမ့်မည်။
ဇင့်နှင့် အရသာ မရခြင်း : ဇင့်ချို့တဲ့ခြင်းသည် အစာစားချင်စိတ်ကို လျော့စေသောကြောင့် အစားအသောက်တွင် ဇင့်ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်ပါစေ။ အနီရောင်အသား၊ ခုံး၊ ကုလားပဲ၊ အစေ့နှင့် အဆံအမျိုးမျိုးတို့သည် ဇင့်ကြွယ်ဝကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကြွက်သားများသည် အမြဲဖြိုခွင်းနေပြီး တစ်ဖန်အမြဲ တည်ဆောက်နေသောကြောင့် ကောင်းမွန်သော အာဟာရဓာတ်များအားလုံးကို ရသလောက်ယူရန် လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အစာစားချင်စိတ် ပျောက်ဆုံးလျှင် အစာစားနှုန်းနည်းလာပြီး ၎င်းသည် ကြွက်သားဆုံးရှုံးခြင်းကို ဦးတည်စေသည်။ အစားအသောက်အရသာကို ကောင်းမွန်စေရန် ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်အပင်များ၊ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များ ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်ပြီး ပြောင်းလဲပြုပြင်မထားသော အစားအသောက်များကို ရှောင်နိုင်သမျှ ရှောင်ပါ။
တစ်နေ့လျှင် ၁၈၀၀ ကယ်လိုရီ : အာဟာရဓာတ်ပေါင်းစုံသည် ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းအလိုက် အလုပ်လုပ်ဆောင်မှုအတွက် ကောင်းမွန်သည်။ သက်ကြီးပိုင်းများ ဂရုစိုက်ရမည့် အဓိက အာဟာရဓာတ်များမှာ ကြွက်သား တည်ဆောက်ခြင်းအတွက် ပရိုတင်း၊ အရိုးသန်မာမှုအတွက် ကယ်လ်ဆီယမ်၊ နှလုံးကျန်းမာရေးအတွက် ဖက်တီးအက်ဆစ်တို့ဖြစ်သည်။ သက်ကြီးပိုင်းတစ်ဦး ကျန်းမာသော ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်စေရန် နေ့စဉ် ၁၈၀၀ ကယ်လိုရီစားသုံးခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ကြွက်သားများအတွက် ပရိုတင်းသည် အရေးကြီးသောကြောင့် သက်ကြီးပိုင်းတို့၏ အစားအသောက်တွင် ပရိုတင်းကြွယ်ဝဖို့ ဂရုပြုရမည်။ အဆီနည်းဒိန်ချဉ်၊ ချိစ့်၊ နို့၊ အဆီနည်းသောအသား၊ ပင်လယ်စာနှင့် အစေ့တို့သည် ပရိုတင်းစားသုံးမှု ကြွယ်ဝစေသည်။
ဖြည့်စွက်စာများ : သင့်အနေနှင့် အစားအသောက်များမှ ၎င်းအာဟာရဓာတ်များ ရရှိရန် ခက်ခဲပါက အာဟာရဖြည့်စွက်စာများမှ အကူအညီရယူနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် Ensure Gold သည် ဗီတာမင် နှင့် သတ္တုဓာတ် ၂၈ မျိုး၊ HMB ( အမိုင်နိုအက်ဆစ်တစ်မျိုး Hydroxymethylbutyrate) တို့ ပြည့်ဝစွာပါဝင်ပြီး ကြွက်သားဆုံးရှုံးမှုကို ခုခံရန်အတွက် အာဟာရဓာတ်ကို ဖြည့်တင်းပေးသည်။
ဗိုင်းရပ်စ်များနှင့် ကူးစက်ရောဂါများကို တိုက်ဖျက်သည့်အခါတွင် လက်ဆေးခြင်းနှင့် မျှတသောအစားအစာများကို စားခြင်းကဲ့သို့သော နေ့စဉ်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများသည် အဓိကကျပါသည်။ ကျွမ်းကျင်သူများက ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို မြှင့်တင်ခြင်းသည် လူတစ်ဦးအားကျန်းမာစွာနေထိုင်ရန် အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည် ဟုဆိုထားပါသည်။
ကိုယ်ခံအားစနစ်အားကောင်းအောင်ထိန်းသိမ်းခြင်းသည် လူကြီးများအတွက် အထူးအရေးကြီးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ အသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှ ကိုယ်ခံစွမ်းအားတုံ့ပြန်မှုစွမ်းရည်လျော့နည်းလာပါသည်။ထို့ကြောင့် ရောဂါကူးစက်မှုနှင့် ကင်ဆာရောဂါများ ပိုမိုဖြစ်စေပါသည်။ အချို့သက်ကြီးရွယ်အိုများသည် ကျန်းမာစွာနေထိုင် ကြသော်လည်း လေ့လာမှုများအရ လူငယ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် သက်ကြီးရွယ်အိုများသည် ကူးစက်ရောဂါများ ကူးစက်နိုင်ချေပိုများကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ထို့ကြောင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို ကောင်းနေအောင်ထားရန် အရေးကြီးပါသည်။
ဤဖြစ်စဉ်ကို ကြည့်ပြီး ကိုယ်ခံအားစနစ်မြှင့်တင်ရန် ဖြစ်နိုင်ပါသလား။ သင်၏အစားအစာတိုးတက်လာလျှင်ဘာဖြစ်မလဲ? အချို့သော ဗီတာမင်များ(သို့မဟုတ်) ဆေးဖက်ဝင်အပင်များကို သုံးစွဲ မှာလား? ကောင်းမွန်သော ကိုယ်ခံအားတုန့်ပြန်မှုကို ရရှိစေရန်မျှော်လင့်ချက်ဖြင့် အခြားလူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းကိုပြုလုပ်မလား? ပထမဆုံးကာကွယ်မှုမှာ ကျန်းမာသောလူနေမှုပုံစံကို ရွေးချယ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ယေဘူယျအားဖြင့် ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်စေသောနည်းလမ်းများကို လိုက်နာခြင်းသည် သင်၏ကိုယ်ခံအားစနစ် ကျန်းမာသန်စွမ်းစေရန်အတွက် သင်ပြုလုပ်နိုင်သည့်အကောင်းဆုံးအဆင့်ဖြစ်ပါသည်။ သင်၏ကိုယ်ခံအားစနစ်အပါအဝင် သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းအားလုံးသည် ပတ်ဝန်းကျင်၏တိုက်ခိုက်မှုများမှကာကွယ်ရန်အတွက် ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း နည်းဗျူဟာများဖြင့် အားဖြည့်ပေးသောအခါပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။
သက်ကြီးရွယ်များအကြား ကိုယ်ခံအားစနစ်ကောင်းမွန်စေရန်အတွက် လူနေမှုပုံစံစသည့်တို့ကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။
၁. မျှတသော အစားအစာများကိုစားသုံးပါ။
အရောင်အမျိုးမျိုးနှင့် အာဟာရရရှိသော အစားအစာများကို စားသုံးခြင်းသည် ကျန်းမာသော ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် စိတ်ကို ထိန်းသိမ်းရာတွင် အဓိက အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် အသက်အရွယ်အိုမင်းလာသည့်အခါတွင် သင့်လျော်သော ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါလည်ပတ်မှုရရှိစေရန်အရေးကြီးပါသည်။ သင်၏နှလုံးမှ ကျောက်ကပ်အထိ မျှတသော ဗီတာမင်နှင့် အာဟာရများပါဝင်သည့် အာဟာရဓာတ်များသည် သင်၏ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကို ကောင်းမွန်စွာ လည်ပတ်စေရန် ကူညီပေးပါသည်။ ကိုယ်ခံအားကို ထိန်းသိမ်းရာတွင် သင့်တော်သောအာဟာရဓာတ်ရရှိမှုသည် အဓိက အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်ပါသည်။အရည်များနှင့်ရေဓာတ်ကို ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းရန်မမေ့ပါနှင့် – ရေသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။
ပုံမှန်နှင့် အလယ်အလတ်အဆင့်ရှိသောလေ့ကျင့်ခန်းများသည် ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် ကြွက်သားများကို ကျန်းမာသန်စွမ်းစေပါသည်။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်အတွက်သာမက စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုနှင့် စိတ်နေစိတ်ထားအတွက်ပါ ကူညီပေးပါသည်။
အိပ်စက်ခြင်းသည် ခန္ဓာကိုယ်နှင့် စိတ်ကို ပြန်လည်ကောင်းမွန်စေပြီး ကျန်းမာသောဘဝပုံစံ၏ အရေးပါသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အိပ်ရေးမဝခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကျန်းမာရေးကို များစွာအကျိုးသက်ရောက် စေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်ခံစားချက်နှင် အာရုံစူးစိုက်မှုကို ထိခိုက်စေပြီး နှလုံးရောဂါ၊ ဆီးချိုရောဂါ စသည့် ပြဿနာများဖြစ်စေပါသည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် အလုပ်များသောကြောင့် (သို့မဟုတ်) အိပ်စက်ခြင်းဆိုင်ရာပြဿနာများကြုံတွေ့နေရသောကြောင့် ကောင်းမွန်စွာအိပ်စက်နိုင်စေဖို့ခက်ခဲကြပါသည်။
၄. လွယ်ကူပြီးကျန်းမာစေသည့် ဖြည့်စွက်အစာအဖြစ် Ensureကိုနေ့စဉ်သောက်ပါ။
သင့်ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုသည့် antioxidants, Vitamin C, Vitamin E နှင့် Selenium အပါအဝင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ဗီတာမင်နှင့် သတ္တုဓာတ် ၂၈မျိုးပါရှိပါသည်။ သင်၏ကြွက်သားဆုံးရှုံမှုကို ကာကွယ်ရန်အတွက် HMB နှင့် ပရိုတင်းပါရှိပါသည်။ အကယ်၍သင်စားသုံးလိုက်သော အစားအစာများတွင် သင်လိုအပ်သောအာဟာရအားလုံးကို မရရှိလျှင် Ensure သည် သင့်အတွက် အထူးအထောက်အကူပြုပါသည်။
ကိုယ်ခံအားကောင်းဖို့ သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက် ဘာကြောင့်အရေးကြီးသနည်း။
ကိုယ်ခံအားစနစ်သည် အန္တရာယ်ရှိသော ပြင်ပမှဝင်လာသည့်အရာများ ဘက်တီးရီးယား၊ ဗိုင်းရပ်စ်၊ မှိုများနှင့် ကင်ဆာဆဲလ်ကဲ့သို့သော အရာများကို တိုက်ခိုက်ပေးခြင်းဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်အားကျန်းမာစေပါသည်။ ၎င်းသည် Lymphocyte ဟုခေါ်သော သွေးဖြူဥဆဲလ်များ ကို လက်ခံပြီးပြန်ထုတ်ပေးသော Lymphnode များအပါအဝင် ခန္ဓာကိုယ်ရှိအင်္ဂါများနှင့် သွေးဆဲလ်များရှိ ရှုပ်ထွေးသောကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Lymph နှင့် သွေးကြောများသည် ရောဂါပိုးရှိသော Lymphocytes များကို ခန္ဓာကိုယ်တစ်လျှောက်သယ်ဆောင်ပေးပါသည်။
အသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှ သူတို့၏ကိုယ်ခံအားစနစ်သည်လည်းစွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းလာ (ယိုယွင်းလာ) ပါသည်။ ၎င်းတွင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသုံးအနှုန်းရှိသည် – ခုခံအားကျဆင်းမှု (သို့မဟုတ်) အသက်အရွယ်နှင့်အလိုက် ကိုယ်ခံအားစနစ်၏ တဖြည်းဖြည်းကျဆင်းခြင်းဖြစ်သည်။ သင်၏လမ်းလျှောက်ခြင်း(သို့မဟုတ်) ပြေးခြင်းအမြန်နှုန်း သကဲ့သို့ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ ရောဂါကူးစက်မှုကို တားဆီးနိုင်စွမ်းသည်လည်း လျော့နည်းသွားပါသည်။
လူတစ်ဦီး၏ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုအားဖြည့်ခြင်းနှင့် ၎င်းအားတတ်နိုင်သမျှကြိုတင်၍ ကျန်းမာစွာထိန်းသိမ်း ထားခြင်းသည် အသက်အရွယ်ရလာတာနှင့်အမျှအရေးကြီးသော အကြောင်းအရင်းဖြစ်ပါသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သက်ကြီးရွယ်အိုများတွင် ကိုယ်ခံအားစနစ်သည် အရင်ကလောက်မခိုင်မြဲတော့ သောကြောင့် ၎င်းတို့ခန္ဓာကိုယ်သည် ရောဂါကူးစက်မှုကို သိရှိစေရန် ပို၍ကြာမြင့်စေပါသည်။ ခန္ဓာကိုယ်သည် ဘက်တီးရီးယားများ (သို့မဟုတ်) ဗိုင်းရပ်စ်များ၏ ပြိုင်ပွဲများတွင် စတင်ဆုံးရှုံးသွားသည်။ သင်ငယ်စဉ်ကထက်ပင် ရောဂါကူးစက်မှုသည် ပိုမို၍ ပြင်းထန်သကဲ့သို့ ခြိမ်းခြောက်မှုများလည် ပိုများလာပြီး ၎င်းတို့ဖြစ်ပွားပြီးလျှင် ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာရန် အလွန်နှေးကွေးပါသည်။
မည်သည့်တိုက်ခိုက်မှုမျိုးမဆို ကိုယ်ခံအားစနစ်စစ်တပ်သည် အစာအိမ်မှစ၍ချီ တက် သည်။ ကျန်းမာသော ကိုယ်ခံအားစစ်သည်များသည် ကောင်းမွန်သောအာဟာရများ ပုံမှန်ရရှိရန်လိုပါသည်။ အဝလွန်ခြင်းကို ရှောင်ရှားခြင်းနှင့် ဆီးချိုရောဂါကဲ့သို့သောနာတာရှည်ရောဂါများကို ထိန်းချုပ်ခြင်းသည် ကိုယ်ခံအားစနစ်အပေါ် ဖိစီးမှုကိုလျော့ချပေးပါသည်။
အကယ်၍သင်သည် စားလိုက်သော အစားအစာများတွင် အာဟာရပြည့်ဝစေရန်လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်ဟုမယူဆပါက ဥပမာအားဖြင့် သင်သည် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို မကြိုက်ပါ။ နေ့စဉ် Multivitamin နှင့် Mineral ဖြည့်စွက်ဆေးများသောက်သုံးခြင်းသည် ကိုယ်ခံစွမ်းအားအတွက် အကျိုးရှိစေသည့်အပြင် အခြားကျန်းမားရေးအကျိုးကျေးဇူးများကိုပါဖြစ်စေပါသည်။ Ensure ကဲ့သို့သော ဖြည့်စွက်အစာများသည် မျှတသော အာဟာရဓာတ်များပါဝင်ပြီး၊ Minerals နှင့် HMB ကဲ့သို့သောပရိုတင်းကို အကျိုးပြုစေသည့်အာဟာရဓာတ်များပါဝင်တာကြောင့် ကြွက်သားနှင့် သန်စွမ်းမှုကို တည်ဆောက်ရာတွင် ကူညီပေးပြီး သက်ကြီးရွယ်အိုများကို ကျန်းမာသန်စွမ်းစေပါသည်။
ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းသည် သက်ကြီးရွယ်အိုများအကြားတုပ်ကွေးနှင့် အဆုတ်ရောင်ရောဂါကဲ့သို့သော အဖြစ်များသည့် ကူးစက်ရောဂါများကို ကာကွယ်ရန်ပထမဆုံးကာကွယ်မှုဖြစ်ပါသည်။ အကြံပြုချက်များအရ သက်ကြီးရွယ်အိုများကို ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းသည် ၎င်းတို့အတွက် ကူးစက်ရောဂါများကို ကာကွယ်ရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်လုပ်ခြင်းသည်လည်း ကျန်းမာသောလူနေမှုပုံစံတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည် လူတစ်ဦး၏ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်စေသည်၊ သွေးပေါင်ချိန်ကို လျော့ချပေးသည်၊ ကိုယ်အလေးချိန်ကိုထိန်းညှိခြင်းနှင့် အခြားရောဂါများဖြစ်ပွားမှုမှလည်းကာကွယ်ပေးပါသည်။ ကျန်းမာသောအစားအစာကို စားသုံခြင်းကဲ့သို့ပင် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းသည်လည်း ယေဘုယျအားဖြင့် ကျန်းမာရေးနှင့် ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို တိုး တက် ကောင်းမွန်စေပါသည်။ ၎င်းသည် ကိုယ်ခံအားစနစ်၏ ဆဲလ်များကို ကိုယ်တွင်းတွင် လွတ်လပ်စွာသွားလာနိုင်သောကြောင့် ၎င်းဆဲလ်များ၏ လုပ်ငန်းများကို ထိထိရောက်ရောက် လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် အထောက်အကူပြုပေးပါသည်။
သက်ကြီးပိုင်းများအတွက် ဒဏ်ရာသက်သာစေရန်နှင့် ကိုယ်ခံအားကိုမြှင့်တင်ပေးသည့် နည်းလမ်းများ။
အသက်ကြီးလာသည့်အခါတွင် ငယ်စဉ်ကကဲ့သို့ သွက်လက်စွာမလှုပ်ရှားနိုင်တော့ဘဲ အရာရာတိုင်းသည် နှေးကွေးလာပါသည်။ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းပြောင်းလဲမှုသည် သင်ကိုယ်တိုင်ခံစားရသည့်အရာဖြစ်သော်လည်း အရေပြားပေါ်ပြောင်းလဲမှုသည် အခြားလူများကို မြင်စေပါသည်။ သင်အသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှ အရေပြားသည် ပါးလာပြီး ဒဏ်ရာများရရှိရန် အလားအလာများရှိသည်။ သက်ကြီးရွယ်အိုတစ်ဦးအနေဖြင့် နာတာရှည်ရောဂါများရှိပါက အချို့သွေးရောဂါနှင့် အာဟာရချို့တဲ့မှုများက ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်း များကို နှေးကွေးစေပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကိုယ်ခံအားဆဲလ်များသည် ကုသရေးတွင်ထိပ်ဆုံးကနေ တာဝန်ရှိတာကြောင့် သင်လုပ်ချင်တဲ့အရာများအားလုံးကို ၎င်းတို့အတွက် ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။
အစားအသောက်နှင့်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဖြင့် သင့်၏ကုသရေးတွင် ထောက်ပံ့ပေးသည့် ကိုယ်ခံအားကို မြှင့်တင်ပါ။
အကယ်၍ဆဲလ်များ စနစ်တွင်ပြုပြင်ရန်နှင့် ကြီးထွားရန် လိုအပ်သောအာဟာရများမရှိပါက ကုသရေလုပ်ငန်းမျာတွင် အနှောက်အယှက်ဖြစ်ပြီး ကူးစက်ရောဂါများနှင့် အကယ်၍ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိသည့်အခါတွင် ပျောက်ကင်းဖို့ကြာနိုင်ပါသည်။ ဆီးချိုးရောဂါရှိသည့် သက်ကြီးရွယ်အိုများသည် မကြာခဏ ထိခိုက်ဒဏ်ရာများဖြစ်တတ်ပြီး ၎င်းဒဏ်ရာများရရှိသည့်အခါတွင် ပျောက်ကင်းစေဖို့ကြာရှည်နိုင်ပါသည်။ ဆီးချိုရောဂါရှိသော သက်ကြီးရွယ်အိုများ၏ ခြေထောက်အောက်ပိုင်းသည် ထုံခြင်းနှင့် နာကျင်မှုကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာများကို ခံစားရန် ခက်ခဲစေပါသည်။ ဆီးချိုရောဂါတွင် သွေးစီးဆင်းမှု လျော့နည်းလာသည်နှင် အမျှ ဒဏ်ရာများကို ပျောက်ကင်းအောင်ကူညီပေးသော ဆဲလ်များသည်လည်း ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်တော့ပါ။ သွေးထဲရှိ သကြားဓာတ်မြင့်မားခြင်းအပါအဝင် သွေးကြောဆိုင်ရာ သွေးလည်ပတ်မှုသည် ကလာပ်စည်းများနှင့် monocytes ကဲ့သို့သော ဆဲလ်များကို ဟန့်တားသောကြောင့် ဆီးချိုသမားများအတွက် ဒဏ်ရာများ သက်သာစေဖို့ အတားအဆီးဖြစ်ပါသည်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းသည် သွေးလည်ပတ်မှုကို ကောင်းစေပြီး ဒဏ်ရာများသက်သာစေဖို့ အကျိုးသက်ရောက်သည်။ ၎င်းနှင့်အတူ ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူဖြစ်စေသည့် အစားအသောက်များ ပရိုတင်း၊ ဒဏ်ရာများကို သက်သာစေသောအာဟာရများ၊ အမိုင်နိုအက်စစ်များသည် အရေပြားနှင့် ကိုယ်ခန္ဓာတစ်သျှူးများကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ရာတွင်ကူညီပေးပါသည်။
ဒဏ်ရာများကို ထောက်ပံ့ပေးခြင်းနှင့် ကောင်းမွန်စွာကုသနိုင်ဖို့ကာကွယ်ပေးခြင်း။
အကယ်၍ အချိန်ကြာမြင့်စွာ လှုပ်ရှာခြင်းမပြုဘဲ လဲနေသော သက်ကြီးရွယ်အိုများတွင် အိပ်ရာနာများ ဖြစ်လေ့ရှိပါသည်။ ၎င်းဖိအားသည် အရိုးများထိပ်တွင် ရှိသော ပျော့ပြောင်းသည့် တစ်ရှုးများသို့ သွေးစီးဆင်းမှု ဖြတ်တောက်စေပါသည်။ ပထမဦးစွာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို ဂရုစိုက်ပေးပြီး ထိုဧရိယာသို့သွေးများ စီးဆင်းစေရန် ထောက်ပံ့ပေးပါ။ ဒဏ်ရာဖြစ်သည့်နေရာပေါ်မူတည်၍ မတ်တပ်ရပ်ခြင်း သို့မဟုတ် လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ဘေးတစ်စောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် မှောက်အိပ်ခြင်းဖြင့် အခြားနေရာများတွင် ဒဏ်ရာများဖြစ်ခြင်း လျော့ကျ စေရန် ၂ နာရီခြားတစ်ခါပြောင်းပေးပါ။ စုတ်ပြဲနေသောဒဏ်ရာများရှိပါက ၎င်းအနာများ ပျောက်ကင်းစေရန်အတွက် အနာများကို သန့်ရှင်းရေး သေချာစွာပြုလုပ်ပေးပါ။ ပတ်တီးစည်းပေး
ခြင်း၊ ဆေးများသေချာစွာထည့်ပေးခြင်း၊ အစိုဓာတ်ရအောင်ဆေးဖြင့်ကုသခြင်း နှင့် အနာ(ဒဏ်ရာ)ပတ်ဝန်းကျင် အား ကျန်းမာအောင် ပြုလုပ်ခြင်းများလုပ်ဆောင်ပေးသင့်ပါသည်။ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းတွင် ဖြစ်ပါက ကုသမှုအတွက် ဆဲလ်များ၏လုပ်ဆောင်မှု နှင့် ကိုယ်ခံစွမ်းအားကို တိုးတက်ရန်အတွက် ဖြည့်စွက်ဆေးများနှင့် ဆရာဝန် အကြံပြုထားသော ဆေးများကို သောက်သုံးသင့်ပါသည်။ ဗီတာမင် စီ နှင့် ဇင့်ကို ထိပ်ဆုံးကနေ ရွေးချယ်သင့်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းတို့သည် ဆဲလ်များကို များစွာပြန့်ပွားစေပါသည်။ သက်ကြီးရွယ်များ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး နှစ်မျိုးအတွက်အတူတူပဲလား? အခြေခံအားဖြင့် တူသော်လည်း အသေးစိတ်အချက်အလက်များအရ အမျိုးသမီတစ်ယောက်အတွက် တစ်နေ့လျှင် ပရိုတင်း ၄၆ ဂရမ်ခန့်လိုအပ်ပြီး အမျိုးသားတစ်ယောက်အတွက် ၅၆ ဂရမ်ခန့်လိုအပ်ပါသည်။ အသီးအနှံအမျိုးမျိုး၊ ကောက်ပဲသီးနှံများနှင့် ဆီနည်းသော နို့ထွက်ပစ္စည်းများပါဝင်ပါသည်။
မှန်ကန်စွာစားသုံးပါ၊ မကြာခဏလှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်ပါ၊ မလိုအပ်သော ဖိစီးမှုများကို ရှောင်ရှားပါ၊ နာတာရှည်ရောဂါများကို ထိန်းချုပ်ပါ၊ ဆီးချိုရောဂါကို ကုသမှုခံယူခြင်းနှင့် သွက်သွက်လက်လက်ရှိခြင်းသည် ကိုယ်ခံအားကိုအထောက်အကူပြုသည့်အပြင် ဒဏ်ရာများကို ကုသရာ တွင်လည်း အကူအညီပေးပါသည်။
အသက်ကြီးချိန်တွင် ကိုယ်ခံအားစနစ်ကောင်းခြင်းသည် အဘယ့်ကြောင့် အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သနည်း။
၎င်းအချက်သည်အသက်ရှည်စွာနေထိုင်ခြင်းနှင့် မသက်ဆိုင်ပါ သို့သော် အသက်ရွယ်ကြီးမြင့်ချိန်တွင် ကျန်းကျန်းမာမာနှင့် ကြော့မော့ စွာနေထိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ။ သို့သော်ထိုသို့မျှော်မှန်းခြင်းထက် ကာယနှင့် စိတ်ကျန်းမာရေးကိုဂရုစိုက်ခြင်း နှင့် ကျန်းမာသန်စွမ်းလိုစိတ်ရှိခြင်းသည် ပို၍ အကျိုးရှိသည် မဟုတ်ပါသလား။ထို့ကြောင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက် ကိုယ်ခံအားစနစ်ကောင်းခြင်းသည် အိုမင်းခြင်း၏ အောင်မြင်မှုအတွက်သော့ချက်ဖြစ်ပါသည်။
အသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှ သင်၏ကိုယ်ခံအားစနစ်သည် မည်သို့ဖြစ်ပျက်နေသနည်း။
သင်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ခံအားစနစ်ပျက်စီးစေသည့် အကြောင်းအရင်းကို ထောက်ပြနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ သို့သော် ၎င်းကို ပျက်စီးစေသည့်အကြောင်းပြချက်များစွာရှိပါသည်။ ဖျားနာရာမှ နာလံထူဖို့ကြာရှည်ခြင်းနှင့် ပုံမှန်ရိုးရှင်းသော အလုပ်များကိုလုပ်ပြီးကြွက်သားများနာကျင်ရာမှ ပြန်လည်သက်သာရန်ကြာရှည်ခြင်း တို့သည် သက်ကြီးရွယ်အိုးများ တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက်ကွဲပြားကြသည်။ ဖျားနာခြင်းနှင့် ရောဂါများကို ဖြစ်ပေါ်စေသောဆဲလ်များကို တိုက်ခိုက်ရန် တာဝန်ယူထားသော T-Cell သည် အသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှ ထုတ်လုပ်မှု ကျဆင်းလာပါသည်။ ၎င်းသည် သင်ယခင်ဖြစ်ဖူးသော ဖျားနာခြင်းများကို ကောင်းစွာ တိုက်ထုတ်နိုင်သော်လည်း ရောဂါအသစ်များအတွက်မှု ပြဿနာတစ်ရပ် ဖြစ်လာပါသည်။ သင်၏ခန္ဓာကိုယ်လုပ်ဆောင်မှုများနှေးကွေးလာသကဲ့သို့ သင်ခန္ဓာကိုယ်ရှိ သွေးဖြူဥထုတ်လုပ်မှုလည်းလျော့နည်းလာပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆို့သော် သင်ကုသခြင်း၏ အကျိုးသက်ရောက် မှုဖြစ်ပါသည်။ ရောဂါကာကွယ်ပေးသော ဓာတ်များလျော့နည်းလာသည်နှင့်အမျှ အသက်ကြီးရွယ်အိုများတွင် ဖျားနာခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်စေသော အဆုတ်ရောင်ဂါ၊ တုပ်ကွေး ရောဂါ၊ နှလုံးသွေးကြောရောဂါနှင့် မေးခိုင်ရောဂါတို့သည် ပိုမိုဖြစ်ပွားလာစေပါသည်။ ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းသည် လည်းထိရောက်မှုလျော့နည်းလာသည်နှင့်အမျှ သက်ကြီးရွယ်အိုများသည် ကိုယ်ခံစွမ်းအားမြှင့်တင်လိုပါက ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
အောင်မြင်သော သက်ကြီးရွယ်အိုများသည် ၎င်းတို့၏ကျန်းမာရေးကို အမြဲကောင်းနေအောင်ထားရမည်။
အောင်မြင်သော သက်ကြီးရွယ်များ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည် ရောဂါများကို ပုံမှန်စစ်ဆေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ သင်အဝလွန်နေလျှင် သင့်အစာအိမ်အတွင်းရှိနေရာများသည် အဆီများဖုံးလွှမ်းနေသောကြောင့် ရောင်ရမ်းခြင်းကို ဖြစ်စေသောကြောင့် သင့်အသက်အရွယ်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားအတွက် သင့်လျော်သော ကိုယ်အလေးချိန်ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပါ။ အဝလွန်ခြင်းကြောင့် တစ်သျှူးများပြိုကွဲခြင်းနှင့် ကိုယ်ခံအားစနစ်အတွက် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါသည်။ သင့်အလုံးစုံကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ရန်ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းသိမ်းခြင်းကကူညီနိုင်ရုံသာမက လတ်ဆတ် သော အသီးအနှံများနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို ပိုမိုစားသုံးခြင်း သည် သင့်ခန္ဓာကိုယ်၏ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ခြင်းကို မြင့်တတ်စေပါသည်။
အောင်မြင်သော အိုမင်းခြင်း၏သော့ချက်တစ်ခုမှာ သင်၏မကောင်းသောအကျင့်စရိုက်များကို ဖြတ်တောက်ပစ်ပါ။
သင်သည်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းအလေ့အထရှိခြင်း (သို့မဟုတ်) လူငယ်ဘဝတွင် ညဘက်ထွက်ပြီး ပျော်ပွဲများတွင် ယမကာများစွာကို သောက်ပြီး ပျော်မွေ့တတ်ပါသလား။ ထိုနှစ်မျိုးလုံးသည်သင်၏ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို ထိခိုက်စေတတ်သောကြောင့် ထိုအကျင့်ဆိုးများကို အမြန်ဆုံးဖြတ်သင့်ပါသည်။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသည် သင့်သွေးထဲရှိဓာတ်တိုးပစ္စည်းများကို ပျက်စီးစေပြီး အဆုတ်ရောင်ခြင်းကို တိုးစေပါသည်။ ၎င်းသည် သွေးထဲရှိ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အန္တရာယ်ရှိသောအရာများကို တိုက်ထုတ်ရမည့်အစား ပြုပြင်ခြင်းကို လုပ်ဆောင်စေပါသည်။ ဆေးလိပ်နှင့် အရက်များ အလွန်အကျွံ သောက်သုံးခြင်းကို ကြာရှည်စွာမပြုလုပ်သင့်ပါ။ ထိုအရာများသည် အူထဲရှိ ကိုယ်ခံစွမ်းအားဆဲလ်များနှင့် ကျန်းမာစေသော ဘက်တီးရီးယားများကိုဖျက်ဆီးပြစ်ပါသည်။ ထိုအရာများသည် အသက်ကြီးလာသည့်အခါ ကျန်းမာရေးကို ထိစေပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အူသည်ကိုယ်ခံအား တစ်ခုလုံး၏ အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ်ခံအားစနစ်တုံ့ပြန်မှုနှေးကွေးပြီးလျှင် ထိုအရာကို နောက်ထပ်ချို့ယွင်းအောင်ထပ်မလုပ်သင့်ပါ။